सरकार हाम्रो श्रम स्विकृति नरोक– युएईका घरेलु कामदारहरु – आफ्नो प्रेरक संसार
Bibas chetan — १५ जेष्ठ २०७५, मंगलवार ०७:२३0comment
नेपालमा श्रम गरु त श्रम गर्ने ठाउँ छैन । विदेश जाउ त सरकारले श्रम स्विकृति दिदैन । सरकारले श्रम स्विकृति नदिएपछि युएई जाने घरेलु कामदारहरु थप रकम तिररे भारतको बाटो हुदै जान छाडेका छैनन् । उनीहरुको भारतको बाटो हुदै बढि रकम तिरेर जानुपर्ने बाध्यता रहेको युएईमा ६ वर्षदेखि घरेलु कामदारको रुपमा काम गर्दै आउनु भएको पुनम ज्ञवली बताउनु हुन्छ‘ सरकारले श्रम स्विकृति दिदैन । म जस्ता सयौ कामदार वर्षेणी युएई घरेलु कामदारको रुपमा आईरहेका छन् ।’ उहाका अनुसार १ हजार ५ सय तिर्नुपर्ने ठाउँमा १ लाख तिस हजारसम्म तिरेर आएका नेपालीहरु पछि छन् । त्यसको दोषी नेपालको बेरोजगारी र नेपाल सरकारले बन्द गरेको श्रम स्विकृति भएको उहा बताउनुहुन्छ । नेपालमा बस्दा केही कमाई नहुने भएपछि बढि पैसा तिरेर जान तयार हुने नेपाली पनि भएकोले श्रम स्विकृति नरोक्नुपर्ने घरेलु कामदारहरुको माग छ ।
अहिले नेपाल सरकारले खाडिमुलुकमा घरायसी कामदारका रुपमा जाने महिलाहरुलाई श्रम स्वीकृति दिदैन । त्यस्को प्रत्येक्ष असर अहिले घरेलु कामदारमा रहेका दिदिबहिनीहरुलाई परेको छ । नयाँलाई स्वीकृति नदिनु होला । किनकी ठगीमा पनि परिन्छ तर पहिलेदेखि काम गरिहने स्वयम स्वयं कामदारलाई राम्रोसँग सोधपुछ गरेर श्रम स्वीकृत गरिदिएको भए धेरैलाई राहत हुने युएईका कामदारहरु बताउछन् । ‘हामी सुरक्षीत छौं र हाम्रो कामको कदर राम्रोसँग हुन्छ भने, हामिजस्तो कामदारलाई श्रम स्वीकृत गरिदिएको भए धेरै राम्रो हुने थियो ।‘ आफ्नो समाचारसँग कुराकानी कै क्रममा ६ वर्ष अघि युएई आउनु भएकी बर्दिया गुलेरियाकि पुणम ग्यावली भन्छिन ‘सुरुमा आउदा घरेलु कामदार भिसा र सोही अनुसारको श्रम गरेर आएको हुँ । दुई वर्ष काम गरेपछि प्रत्येक वर्ष घर बिदा जान पाउने सुविधा पनि छ । तर घर जान नपाएको ३ वर्ष भैसकेको छ । श्रमको कारण घर जान पाएको छुइन । रोजगार छोडेर एकैचोटि जाउ त घरमा के गरौं ? रोजगारी छैन ! बालबच्चालाई पढाउनकै लागि भएनी बिदेशिनु पर्ने बाध्याता छ । यतै बसौ त ३÷४ वर्ष सम्म घर नजादा छोराछोरीको न्यास्रो लाग्ने र परिवार बाट टाढाहुने पिर चिन्ता दिनरात लागिरहन्छ ।’
यस्तै मोरङ्ग केराबारी स्थायी बसोबास भएकी कुमारी गुरुङ भन्नुहुन्छ ‘डेढसाल अघि आउदा भिजिट भिसामा आएकि हुँ । श्रम गरेको छैन । म आउने बेला घरायसी कामका लागी श्रम स्वीकृति दिदैन थियो । आफ्नो घरमा भने आगो बाल्न र एकचाक खान गह्रो नभएपनी छोराछोरीकै पढाइ अधुरो रहेपछि आगो बालेर के गर्ने ? एकमहिना घर छुट्टी जान पाउछु तर नेपाल गएपछी फर्कन पाइन्न । आउन नपाउने डरले छुट्टिमा पनि घर गएको छुईन ।’
त्यस्तै भोजपुर हतुवागडि गाउँपालिका स्थायी घर भएकी कल्पना राई पनि श्रमकै कारण ४ वर्षदेखि घर नगई युएईमा नै काम गरिरहनु भएको छ । घर जाने तयारी गरेको तर फर्केर आउन नपाएपछि, कसरी फर्कने ? जाने कि नजाने ? भन्ने कुरामा अलमल रहेको बताउनु भयो । सरकारले श्रम स्विकृति दिएको भए वर्षमा उक पटक घर जान पाउने विदामा घर परिवारलाई भेट्न पाउने उनीहरु काम र पैसाको मायाले युएई मै बस्न बाध्य छन् ।